गर्मी सुरु भयो भनेर ढुक्क हुनुहुुन्छ ? भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना ! — Bhugolnews
गर्मी सुरु भयो भनेर ढुक्क हुनुहुुन्छ ? भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना !
काठमाडौं । केही दिन देखि गर्मी बढ्दै गएपछि अधिकांशले यस वर्षको जाडो सकिएको अनुमान गर्न थालेका छन् । जाडोमा लगाउने कपडामा कटौती गर्न थाल्नु भएको छ भने हतार हुन सक्छ । माघ महिनामै हिमपातसहित वर्षा हुनसक्ने मौसम विज्ञान विभाग जनाएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वसूचना केन्द्रले माघ महिनाको अन्तिम सातामा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै सतर्क रहन सूचना नै जारी गरिएको छ ।
पश्चिमी वायुको प्रभावको नयाँ प्रणाली बुधबारबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले आज बिहानैबाट पश्चिमी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था छ । आज दिउँसोदेखि नै यो बादल मध्य र पूर्वतर्फ सर्न थालेको छ । साँझसम्म यसले नेपालको मध्य भाग पनि ढाकिसकेको हुनेछ । यो बादल पूर्वी नेपाल हुँदै नबाहिरिएसम्म मौसममा गडबडी जारी रहन्छ ।
त्यसैले बिहीबारदेखि शनिबारसम्म देशभर वर्षा र हिमपात हुने मौसमविद मञ्जु बासीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा भोलि र पर्सि पनि वर्षा हुन्छ । शनिबारबाट मात्र देशभर मौसममा सुधार आउन थाल्ने छ ।’
पश्चिमी वायुको प्रभावले उच्च पहाडी भागमा भारी हिमपात हुने र पहिरो पनि जाने खतरा छ । त्यसैले मौसमविदले केही दिन ट्रेकिङ नजान सुझाव दिएका छन् । मौसमविद बासीले भनिन्, ‘हिम पहिरो जाने, चिसो पनि बढ्ने भएकाले ट्रेकिङ्ग जानेहरुका लागि झन् गाह्रो हुन्छ, त्यसैले केही दिन नगएकै राम्रो ।’
मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वसूचना केन्द्रले पनि बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन भनेको छ । सूचनामा लेखिएको छ, ‘उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुन सक्ने देखिएकोले हिमपहिरो जानसक्ने क्षेत्र र पहिरो जानसक्ने क्षेत्रमा सतर्क रहौं । पहाडी क्षेत्रका ससाना खोलाहरुमा आकस्मिक बहाव प्रवाह हुन पनि सक्छ ।’
मौसम विज्ञान विभागका अनुसार माघ २३ गते बुधबार दिउँसो पश्चिमी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र पश्चिमी तथा मध्य उच्च हिमाली भागमा हल्का हिमपात हुने छ । बुधबार राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिमका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मध्यका थोरै स्थानहरुमा हल्का वर्षा हुने छ । पश्चिमी तथा मध्य उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको पनि सम्भावना छ ।
माघ २४ गते बिहीबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने छ । देशका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र देशको पश्चिमी साथै मध्य भूभागको एक(दुई स्थानमा भारी वर्षा समेत हुने सम्भावना देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना मौसमविदले औंल्याएका छन् । पश्चिमी र मध्य उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका थोरै स्थानहरुमा भारी हिमपातको सम्भावना छ ।
बिहीबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुनेछ । देशका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ । एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा भारी हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । देशका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका अधिकांश स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एकदुई स्थानहरुमा भारी हिमपातको पनि सम्भावना देखिन्छ्र ।
शुक्रबार राति देशभर सामान्य बदली रहने छ । केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना देखिन्छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम विज्ञान विभागले बुलेटिनमा उल्लेख छ ।